भाग्यमानी हात्ती राम लक्ष्मण ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भाग्यमानी हात्ती राम लक्ष्मण !
९ साउन, चितवन । हात्तीले जुम्ल्याहा सन्तान जन्माउनुलाई विश्वमा निकै दुर्लभ घटना मान्ने गरिएको छ । गर्भाधान भएको १८ महिनामा बच्चा जन्माउने हात्तीले प्रायःजसो एक छावा मात्रै जन्माउछ ।
रोमियोले समय समयमा मानव वस्तीमा गएर वितन्डा पनि मच्चाउने गर्दछ । विगत लामो समयदेखि प्रजनन् केन्द्रमा पालैपालो रोमियो र ध्रुबेले प्रजनन् गराउँदै आएका छन्